Ukwehlukaniswa kwemakethe yezabasebenzi ngokusebenza
Ukuthengisa, Ukukhangisa Kwamanye amazwe
Esikhathini samanje sokuthuthukiswa kobudlelwane bomnotho, okungajwayelekile njengoba kungase kubonakale kwabanye hhayi abantu abavamile nje kuphela, kodwa futhi nabachwepheshe, ikhono lomuntu lomculi lihlala, njengangaphambili. Ngokungangabazeki, intuthuko yezobuchwepheshe nezobuchwepheshe, ukwethulwa kobuchwephesha obuphambili kakhulu, okukwazi kakhulu ukufaka umuntu esikhundleni somsebenzi onesizotha nomsebenzi, kungabandakanyi izimo ezilimazayo nezingozi, zibaluleke kakhulu, kodwa indima yokudala emisebenzini eminingi ibaluleke nakakhulu. Ngakho-ke, imiphumela yokukhiqiza ngokuqondile ixhomeke emgangathweni womsebenzi wezobuchwepheshe obuphezulu kakhulu nabaqeqeshiwe . Ngenxa yalokho, ukuhlukaniswa kwemakethe yezabasebenzi kuthatha uhlaka oluthe xaxa.
Kungani kunesigaba sezimakethe zomsebenzi
Wonke umuntu uyazi i-triad "capital-land-labor", okuyisisekelo sokwandisa umkhiqizo wezabasebenzi futhi, ngokufanele, imali engenayo. Amashumi ambalwa eminyaka edlule ngokwezinga le-macroeconomic, isakhiwo sokuthengisa emhlabeni jikelele sibonise ukuthi kwakungumsebenzi oqondile, okuwukuthi abasebenzi abasebenza kahle, okwaba yisici esinqunyiwe. Umphumela wezehlakalo ezinjalo ngokungangabazeki ukukhula kwesigaba semakethe yezabasebenzi, okungukuthi, isimo lapho kungabi nzuzo kwezomnotho ochwepheshe abaqeqeshiwe ukuba bathuthele kwenye indawo, okuyinkimbinkimbi enkulu ekuhambeni komsebenzi. Kumele kuqashelwe ukuthi izingxenye zezimakethe zomsebenzi zomhlaba sezivele zakhiwe ngezindlela eziningi, njengokuhamba okuqinile, okungahambi kahle.
Kodwa lokhu kuyilanga elilodwa kuphela lwemali. Njengomkhuba wokubonisa, akukho iqiniso elilodwa elilodwa noma amaphesenti angu-100 aqhubekayo. Ngokungangabazeki, ukuhlanganiswa kwemakethe yomhlaba kukhuthaza ukuthuthukiswa kochwepheshe bephrofayili encane, ngaphezu kwalokho, abaqashi bazimisele ukutshala izimali ezinkulu ngokwanele ekuthuthukiseni amakhono, ukuqeqesha abasebenzi kanye nabasebenzi (isibonelo, e-US sikhuluma ngamashumi ezinkulungwane zezigidi zamadola ezizimele, Lapho lesi sibalo sifinyelela amakhulu). Kodwa kukhona inqubo eguqukayo kule nqubo. Qaphela ukuthi izimiso eziyisisekelo zamaningi athuthukile (okungenani i-jure) yi-orientation yomphakathi yokukhiqiza, okungukuthi, ukuvikelwa komphakathi kwesisebenzi kungaphambili. Kodwa lokhu kusho ukuthi, okungenani, ukuhamba kwalokhu okulandelayo. Ngakho-ke, izinhlobo ezihlukahlukene zokubuyisela izifundo zabasebenzi kwezinye izinto ezikhethekile ziba zivame kakhulu. Ngokuvamile abaqashi banesithakazelo kulokhu, babhekene nokuntuleka kwezabasebenzi, kuhlanganise nokuqeqeshwa, kulokhu noma kulolu phiko lokukhiqiza.
Isilinganiso somhlaba jikelele
Imakethe yezabasebenzi iye yaba yinto ebalulekile eminyakeni yamuva, omunye angase athi, isici sezinhlaka zezombusazwe zomhlaba wonke. Inkinga yokufuduka, okwaholela ekutheni ukuthengiswa kwamanye amazwe, kunzima kakhulu emazweni amaningi aseYurophu, naseMelika futhi. Okubizwa okuthiwa ukuvikelwa kwezenhlalakahle kwabantu kubheka njengemagnet izinhlobo ezahlukene zamaqembu abantu, okungekho, ngencazelo, umsebenzi wangaphandle. Ngakolunye uhlangothi, kunesifiso sokuheha abachwepheshe bezobuchwepheshe ezweni lonke, ngakolunye uhlangothi - ithemba lokunyuka kwemisebenzi ngenzuzo yabasanda kufika. Kulesi simo, ukuhlukaniswa kwemakethe yezabasebenzi kubonakala kuyo yonke ubuhle bayo, kuxhumanisa isisebenzi, umenzi nomsebenzi wakhe . Noma kunjalo, ucwaningo lufakazela ukuthi iningi labaqashi baseRussia bakhetha abahlukumezi abakwazi ukusebenza ngokuhle, ngokubonisa, babonise izimfanelo zenhlangano nezokuphatha, isibonelo, emazweni aseNtshonalanga, ngokusho kwama polls abasebenzi abalinganiselwa ku-40%.
Izinga lokungasebenzi kanye namandla alo
Ukuhlaziywa kwemakethe yokuthengisa
Ukukhetha izingxenye ezihlosiwe zemakethe yezinsizakalo zabezindaba ngokusekelwe kwezobuchwepheshe be-IT
Ukufudumala ngoba usana: ingozi noma isidingo?
Knife Zhbanov: ukukhiqizwa, kuvetwa kwebalingisi, ukubuyekezwa
Trakia Plaza Hotel 4 * (Sunny Beach): ukubuyekezwa, izincazelo, izinombolo kanye nokubuyekeza
Ihhotela Themis Beach Ihhotela 4 * (eGrisi, eKrethe nase Heraklion): izithombe kanye nokubuyekeza
Indlela avuselele ibhethri imoto e frost?
Roman D. Granik, "Ngizofika umbelesele": isifinyezo, incazelo kanye nokubuyekeza
Ingabe ikhona ifoni ezinhle Chinese? Kwemikhiqizo